“Na-ahụ Ịdị Mma Jehova”
Ụlọ Nche (Nke A Na-amụ Amụ) | Febụwarị 2014
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Mizo Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Nsogbu nwere ike ịkpa anyị aka ọjọọ. O nwere ike ime ka anyị na-eche oké echiche, mee ka ike ụwa gwụ anyị, obi ana-ajọkwa anyị njọ. Eze Devid, bụ́ onye chịrị Izrel n’oge ochie, nwere ọtụtụ nsogbu. Olee otú o si merie ha? N’otu abụ na-emetụ n’obi Devid bụrụ, o kwuru, sị: “Eji m olu m kpọkuo Jehova ka o nyere m aka; eji m olu m malite itiku Jehova ka o meere m amara. M nọ na-awụpụ nchegbu m n’ihu ya dị ka mmiri. M nọ na-akọ nhụjuanya m n’ihu ya, mgbe ike gwụrụ mmụọ m n’ime m. Mgbe ahụ, gị onwe gị maara okporo ụzọ m.” N’eziokwu, Devid ji obi umeala kpegara Chineke ekpere ka o nyere ya aka.—Ọma 142:1-3.
Mgbe ihe siiri Devid ike, o ji obi umeala kpegara Chineke ekpere ka o nyere ya aka
N’abụ ọma ọzọ Devid bụrụ, ọ sịrị: “Otu ihe ka m rịọrọ Jehova—ọ bụ ihe m ga-achọ, ka m biri n’ụlọ Jehova ụbọchị niile nke ndụ m, ka m wee na-ahụ ịdị mma Jehova, ka m wee jirikwa obi ekele na-ele ụlọ nsọ ya anya.” (Ọma 27:4) Devid abụghị onye Livaị. Ma, were ya na ị na-ahụ ebe o guzo n’èzí, n’ebe dị nso n’ogige ụlọ nsọ ahụ a na-anọ efe Jehova. Obi dị Devid ezigbo ụtọ. Ọ bụ ya mere o ji chọọ ibi n’ebe ahụ ụbọchị ndụ ya niile ka o wee “na-ahụ ịdị mma Jehova.”
Okwu Hibru e si sụgharịta “ịdị mma” e kwuru okwu ya n’Abụ Ọma 27:4 pụtara ihe obi mmadụ nabatara na ihe na-eme ya obi ụtọ. Devid anaghị eji ndokwa Jehova mere ka a na-efe ya egwu egwu. Onye ọ bụla n’ime anyị kwesịrị ịjụ onwe ya, sị, ‘Ọ̀ dị m otú ahụ ọ dị Devid?’
JIRI OBI ỤTỌ NA-ELE NDOKWA CHINEKE MERE ANYA
Taa, Jehova emeghị ndokwa ka anyị na-aga n’ụdị ụlọ nsọ ahụ ụmụ Izrel gara ka anyị na ya nwee ike ịdị ná mma. O mere ndokwa ka e nwee ụlọ nsọ ihe atụ, ya bụ, ndokwa o mere ka anyị na-efe ya ezi ofufe. * Ọ bụrụ na anyị ejiri obi ụtọ na-ele ndokwa a anya, anyị ga ‘na-ahụkwa ịdị mma Jehova.’
Chegodị banyere ebe ịchụàjà nsure ọkụ e ji ọla kọpa mee, nke dị ná mbata ụlọikwuu. (Ọpụ. 38:1, 2; 40:6) Ebe ịchụàjà ahụ nọchiri anya nnabata Chineke nabatara àjà Jizọs ji ndụ ya chụọ. (Hib. 10:5-10) Chegodị uru àjà ahụ baara anyị. Pọl onyeozi dere, sị: “Mgbe anyị bụ ndị iro, e mere ka anyị na Chineke dị ná mma site n’ọnwụ Ọkpara ya.” (Rom 5:10) Ọ bụrụ na anyị enwee okwukwe n’àjà Jizọs ji ndụ ya chụọ, anyị na Chineke ga-adị ná mma, ya emezie ka ọ na-ele anyị anya ọma ma tụkwasị anyị obi. Ọ ga-emekwa ka anyị na ya bụrụ ezigbo enyi.—Ọma 25:14.
Ebe ọ bụ na ‘e hichapụla mmehie anyị,’ Jehova emeela ka obi ruo anyị ala. (Ọrụ 3:19) Anyị dị ka onye mkpọrọ a mara ikpe ọnwụ n’ihi ihe ọjọọ o mere. Ka ọ na-eche ụbọchị a ga-egbu ya, ihe ahụ o mere wutere ya, ya agbanwee. Mgbe otu ọkàikpe nwere obiọma hụrụ na ọ gbanweela, ọ gbaghaara ya ihe niile o mere, ma kagbuo ikpe ọnwụ ahụ a mara ya. Obi ga-atọgbu onye mkpọrọ ahụ atọgbu. Jehova na-eme ka ọkàikpe ahụ. Ọ bụrụ na onye mmehie echegharịa, ọ ga-ele ya anya ọma ma kagbuo ikpe ọnwụ a mara ya.
KA IFE JEHOVA NA-ATỌ GỊ ỤTỌ
E nwere ihe ụfọdụ a na-eme n’ofufe Jehova Devid na-ahụ ma ọ gaa n’ụlọ Jehova. Dị ka ihe atụ, ọ na-ahụ ọtụtụ ndị Izrel ibe ya gbakọrọnụ, ebe a na-agụpụta Iwu Mozis n’ihu ọha ma na-akọwa ya, ebe a na-esure ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, na ebe ndị nchụàjà na ndị Livaị na-eje ozi dị nsọ. (Ọpụ. 30:34-38; Ọnụ Ọgụ. 3:5-8; Diut. 31:9-12) Taa, e nwere ihe yiri ihe ndị ahụ ndị Izrel na-eme mgbe ha na-efe Chineke.
Otú ahụ ọ dị n’oge ochie bụ otú ọ dị taa. Ọ “dị mma, bụrụkwa ihe na-enye obi ụtọ mgbe ụmụnne bikọtara ọnụ n’ịdị n’otu!” (Ọma 133:1) Ụmụnna anyị ebukwuola ibu n’ụwa niile. (1 Pita 2:17) N’ọmụmụ ihe, a na-agụ Baịbụl ma kọwaa ya. Jehova ejirila nzukọ ya kụziere anyị ọtụtụ ihe. E bipụtakwala ọtụtụ akwụkwọ anyị ga-eji na-amụ ihe ma naanị anyị chọọ ịmụ ihe na ndị nke anyị na ezinụlọ anyị ga-eji na-amụ ihe. Otu onye so n’Òtù Na-achị Isi kwuru, sị: ‘M na-agụ Okwu Jehova, chebara ya echiche, mee nchọnchọ ka m nwee ike ịghọta ihe m gụrụ. Ihe ndị a emeela ka m mụta ọtụtụ ihe gbasara Jehova, meekwa ka obi na-adị m mma.’ N’eziokwu, ‘ihe ọmụma nwere ike ịna-atọ mkpụrụ obi gị ụtọ.’—Ilu 2:10.
Taa, ndị ohu Chineke na-ekpegara ya ekpere kwa ụbọchị. Ọ na-anụkwa ekpere ha. Ọ na-ewere ya ka ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ. (Ọma 141:2) Obi na-atọ anyị ụtọ ma anyị cheta na ihe anyị na-adị Jehova Chineke mma mgbe ọ bụla anyị ji obi umeala kpegara ya ekpere.
Mozis kpere ekpere, sị: “Ka ịdị mma Jehova bụ́ Chineke anyị dịkwasị anyị, meekwa ka ọrụ aka anyị guzosiere anyị ike.” (Ọma 90:17) Jehova ga na-agọzi ozi anyị ma anyị jiri obi anyị niile na-eje ya. (Ilu 10:22) O nwere ike ịbụ na anyị enyerela ụfọdụ ndị aka, ha amụta eziokwu. O nwekwara ike ịbụ na anyị ejeela ozi ọtụtụ afọ n’agbanyeghị na ụfọdụ ndị anaghị enwe mmasị n’ozi anyị, ma ọ bụkwanụ na anyị na-arịa ọrịa, a na-akpagbu anyị, e nweekwa ihe ndị na-enye anyị nsogbu n’obi. (1 Tesa. 2:2) Ma, ànyị ga-asị na anyị ahụbeghị “ịdị mma Jehova” ma ghọta na obi dị Nna anyị nke eluigwe ụtọ n’ihi mbọ anyị na-agba?
Devid bụrụ abụ, sị, “Jehova bụ òkè e kenyere m nakwa iko e nyere m. Ị na-ejidesiri m òkè m ike. Ihe ị tụrụ atụ̀ inye m ka ọ bụrụ ihe nketa m dị mma.” (Ọma 16:5, 6) Obi dị Devid ụtọ maka “òkè” e kenyere ya, nke pụtara na obi dị ya ụtọ na ya na Jehova dị ná mma, ya enweekwa ihe ùgwù ịna-ejere ya ozi. Ihe nwere ike isiri anyị ike otú ahụ o siiri Devid. Ma, e nwere ọtụtụ ụzọ Jehova sirila gọzie anyị. N’ihi ya, ka ife Jehova na-atọ anyị ụtọ. Ka anyị jiri obi ụtọ na-ele ụlọ nsọ ihe atụ ya anya.
^ para. 6 Gụọ Ụlọ Nche July 1, 1996, peeji nke 14-24.
Na-eto Kraịst, Bụ́ Eze Dị Ebube
Ṅụrịa Ọṅụ n’Ihi Ọlụlụ Nwunye nke Nwa Atụrụ Ahụ
Jehova Na-egboro Anyị Mkpa ma Na-echebe Anyị
Jehova Bụ Ezigbo Enyi Anyị
FROM OUR ARCHIVES Ihe E Mere Otu Narị Afọ Gara Aga, nke Mere Ka E Nwee Okwukwe
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Febụwarị 2014
ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Febụwarị 2014